မိန်းမနိုင်နည်းမှအဆက်(သို့မဟုတ်)နားလည်မှု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Relationships & Family » မိန်းမနိုင်နည်းမှအဆက်(သို့မဟုတ်)နားလည်မှု
Posted by johnnydeer on Jan 25, 2013 in Relationships & Family | 12 comments
မနေ့တုန်းက ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ မိန်းမနိုင်နည်းရဲ့ အဆက်လို့ ယူဆချင်လဲ ယူဆကြပါတော့…နားလည်မှု ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးချင်တာပါ…အောက်ကတက်လာတဲ့ ကောမန့် တော်တော် များများ မှာ ကျွန်တော်တို့ ကျွန်မတို့ကဖြင့် နားလည်မှု အပြည့်နဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဖြစ်ကြောင်း အိမ်ထောင်သည်တွေကလဲ ပြောကြတယ်…လူပျို အပျိုတွေကလဲ အိမ်ထောင်ပြုလို့ကတော့ ဘယ်တော့မှ ရန်မဖြစ်တဲ့ နားလည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဖြစ်အောင်တည်ဆောက်မယ် ဆိုပြီး စိတ်ကူးယဉ်တတ်ကြတယ်…ဒီ နားလည်မှုဆိုတဲ့ စကားဟာ စာလုံးနဲ့ရေးရင် ၃ လုံးထဲ ရှိပေမယ့် တကယ့်တကယ်တော့ တော်တော် မလွယ်တဲ့ အမျိုးပါ…ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အိမ်ထောင်ပြုပြီဆိုတာ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူညီတဲ့ဘ၀နှစ်ခုကို တစ်ခုထဲ ဖြစ်အောင် ဇွတ်တွဲစပ်ရတဲ့ အမျိုးကိုး…အဲ့ဒီမှာ မတူညီတဲ့ ဘ၀လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆိုတာက ၀ါသနာ..နေထိုင်မှုပုံစံ..စိတ်ဝင်စားမှု..အများကြီး အများကြီးပါ…တူတာထက် မတူတာက ပိုများတာပါကလား…ရည်းစား ဘ၀တုန်းကတော့ ချစ်တဲ့စိတ် အပြည့်နဲ့ ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ အပြစ်ဆိုတာ ဘယ်မြင်မှာလဲ…ညားကာစလဲ အချစ်တွေ ပြည့်နေတုန်း ဘာမှ မဖြစ်သေးဘူး…အဲ…နဲနဲ ကြာလာမှ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဇာတ်လမ်းလေးတွေ စလာတော့တာ…ဥပမာ ပေါ့ဗျာ..ကျွန်တော့် အိမ်ထောင်ရေးဆိုပါတော့ မိန်းမက ညဆို ၉ နာရီလောက်ဆို အိပ်ပြီ…ကျွန်တော်က ည ၁ နာရီ ၂နာရီမှ အိပ်ပျော်တယ်…ဒီလို အသေးအဖွဲလေးတွေကစပြီး နားလည်မှု ရှိအောင် တော်တော့်ကို လုပ်ယူရတယ်…ကျွန်တော်က အခုလို စာရေးနေတဲ့အချိန်ဆို သူက အပြင် မုန့်ထွက်စားချင်လို့ လိုက်ပို့စေချင်တယ်…ကျွန်တော်က စာရေးနေတာမပြတ်သေးလို့ အေး…ခဏလေးစောင့်ဦး…လို့ပြောလိုက်ရင် သူက အကိုကလဲ အရည်မရ အဖတ်မရ ရေးနေတယ်…ဒီမှာဗိုက်ဆာလှပါပြီဆို..လို့လဲ ပြောလိုက်ရော ဒေါသတွေတချောင်းချောင်းထွက်ကုန်တော့တာပဲ..ကိုယ်က မုဒ် အပြည့်နဲ့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကို ဒီလိုလာပြောလို့ကတော့ ကိုယ်ကလဲ လူပဲလေ…စိတ်တိုတတ်တာပေါ့..သူ့ဘက်က စဉ်းစားတော့လဲ သူ့စိတ်ထဲ ဗိုက်ဆာတာ…ဂရုစိုက်ခံချင်တာ…လိုက်ပို့ပေးစေချင်တာ ဒါတွေပဲ ရှိတာကိုး…ဒီလို အသေးအဖွဲလေးတွေကစပြီး အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ စကွဲပြားလာတော့တာပါပဲ…ဒီနားလည်မှုဆိုတာ ပြောတော့တာလွယ်တာ..တကယ့်လက်တွေ့ တည်ဆောက်ရင် လုံးဝမလွယ်ဘူးနော…ဘာမဟုတ်တဲ့ တီဗီကြည့်တာတောင်မှ ကိုယ်က မန်ယူနဲ့ ချလ်ဆီးကန်တဲ့ တကယ့်ပွဲကြီး ပွဲကောင်းမို့လို့ကြည့်ဖို့အားခဲထားတယ်…တကယ့်အချိန်လဲရောက်ရော သူက ဖက်ရှင်ရှိုးပွဲက အ၀တ်အစားပြပွဲကြည့်နေတယ်..ကိုယ်ကလိုင်းပြောင်းလိုက် သူကပြောင်းလိုက်နဲ့ ပြသနာ စတက်တော့တာပါပဲ…ချစ်လို့ယူထားတာလားလို့မေးရင် ချစ်တာပေါ့ဗျာ…ဘာလို့ ရန်ဖြစ်တာလဲ မေးရင်လဲ ဖြစ်တာပေါ့ဗျာ…ရန်ဖြစ်တာပဲဗျာ.. အကြောင်းပြချက်မလိုပါဘူး လို့ပဲ ဖြေယုံပဲ…ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ရန်ဖြစ်တိုင်းလဲ အကြောင်းပြချက် ရှိမှမရှိတာ..သက်တူ ရွယ်တူ ယူထားတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဆိုနည်းနည်းတော်ဦးမယ်ထင်တယ်…မိန်းမက ၁၀ နှစ်နီးပါးငယ်နေတော့ ပိုဆိုးပေါ့ဗျာ…အင်ဂျင်နီယာတွေ ဘာမှလဲမတတ်ပါဘူး..ပြောရင် ကိုယ်ကဒေါသထွက်…ဆရာဝန်တွေ ဆေးရုံတွေ ဆေးခန်းတွေကတော့ ၀ိုက်တီးတွေချည်းပဲ ..ဒီကြားထဲ ပိုက်ဆံလဲယူသေး..ကျေးဇူးရှင်စတိုင်က ချိုးသေးလို့ပြောလိုက်ရင် သူက စိတ်ဆိုး..ဟိုး..ဟိုး..အမျိုးမျိုးပဲဗျို့…စိတ်ဆိုးကြပြီးတော့လဲ ပြီးသလားမထင်နဲ့…သူကလဲ သူ့မိသားစု အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ဆရာ…ကျွန်တော်ကလဲ အိမ်မှာ ဗိုလ်…ငယ်ငယ်ထဲက အိမ်ကလူတွေနဲ့ စိတ်ဆိုးရင်တောင် တစ်ခါမှ ကိုယ်က စခေါ်ဘူးတာမဟုတ်ဘူး…သူလဲ ဒီအတိုင်းပဲ…ဒီနှစ်ယောက် ရန်ဖြစ်တော့ ပြန်ခေါ်ဖို့ဟာ တော်တော် ကြာတယ်…သူကလဲ မလျှော့..ကိုယ်ကလဲ တင်းနဲ့…အစုံပါပဲ…အခု ကလေးတွေရသွားမှ ဘာပဲပြောပြော တော်တော်တော်သွားသေးတယ်…အိမ်ထောင်တစ်ခု တည်မြဲဖို့က သားသမီးကလဲ အခရာ ကျတယ်ထင်တာပဲ…ဘာပဲပြောပြော သားသမီးမျက်နှာ ရှိသေးတော့ တော်ယုံတန်ယုံ သိပ်မဖြစ်တော့ဘူး…ဖြစ်ရင်လဲ ကွဲမယ် ကွာမယ် ဆိုတဲ့ အဆင့် မရောက်တော့ဘူး…အရင်တုန်းကတော့ ဘာဖြစ်ဖြစ် ကွဲမယ်ဆိုတာက စတာပဲ…အိမ်ထောင်သက် လေးနှစ်လောက်ကျော်လာပြီးမှ နည်းနည်းငြိမ်သွားတာ…ဒါတောင် ၆ နှစ်လောက်ကြိုက်ပြီးမှ ယူထားလို့နော…မိဘ ပေးစားတာယူထားလို့ကတော့ ဘယ်လိုလာမလဲ မသိဘူး…ယောက်ကျားတစ်ယောက် စိတ်အညစ်ရဆုံးအချိန်ကကော ဘယ်အချိန်လဲ သိလား…မိဘနဲ့ မိန်းမ အဆင်မပြေတဲ့အချိန်ဆို တကယ်စိတ်ညစ်စရာကောင်းတာပါကလား…တဘက်ကလဲ မိဘ..တဘက်ကလဲ မိန်းမ တော်တော် ကြားညပ်ပြီး တအားစိတ်ညစ်စရာ ကောင်းတယ်…မိန်းမကလဲ ကလေးစိတ်ဆိုတော့ ထင်ချင်ရာထင် လုပ်ချင်ရာလုပ် ပြောချင်ရာပြော…မိဘကကျတော့ အသက်က ကြီးလာတော့ စကားတစ်ခွန်းကို ထပ်ကာထပ်ကာပြော…ပြသနာတွေတက်…မိန်းမက ကျတော့ အကို့ အမေက ဘာပြောတယ်…အဖေက ဘာပြောတယ်…ကိုယ့်လာပြော…အမေနဲ့ အဖေကျတော့ ဟေ့ကောင် မင့်မိန်းမက ငါတုိ့ကို ဘယ်လိုပြောသွားတယ် ကြည့်ပြောထားဦး…ငါတို့အိမ်မှာနေပြီး သူ့မျက်နှာ ငါတို့ ကြည့်မနေနိုင်ဘူး ဆိုပြီးခေါ်ပြော…တခါတလေ ကိုယ့်ကို ကိုယ် သတ်တောင်သေပစ်လိုက်ချင်တယ်…မိန်းမဘက် ပါပြန်တော့ကျ မိဘတွေ စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး ကိုယ်က သားဆိုးဖြစ်ဦးမယ်…မိဘဘက် ပါပြန်တော့ကျ အိမ်ခေါ်ထားပြီး တမိသားစုလုံး နှိပ်စက်တယ်ဖြစ်ဦးမယ်..တကယ့် ကျဉ်းထဲ ကျပ်ထဲပါပဲ…ဒါကြောင့် မိန်းမကို နဲနဲတော့ နိုင်ထားသင့်တယ်လို့ ကျွန်တော်ကရေးတာ…နိုင်ထားတော့ တခြမ်းတော့ စိတ်ချမ်းသာတာပေါ့ဗျာ…ဒီ နားလည်မှု ဆိုတာကတော့တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀မှာ တကယ်တမ်းတည်ဆောက်ကြည့်ရင် တော်တော်မလွယ်တာပါလား လို့ပဲပြောချင်တော့တယ်…အများကြီးပါဗျာ…ထပ်ရေးပြရရင်တော့ လုံးချင်းတအုပ်လောက်ရေးလို့ရလောက်တယ်…လူပျို အပျိုတွေကလဲ စိတ်ကူးယဉ်တတ်ကြတယ်..ဒီ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး…သူများနဲ့ မတူအောင် စံပြ အိမ်ထောင်ရေးတည်ဆောက်ကြမယ်…သားသမီးကိုလဲ စံပြမိဘဖြစ်အောင် မွေးမြူကြမယ်…ဒီလို စိတ်ကူးယဉ်တတ်ကြတယ်…(စကားမစပ်…ကျွန်တော်က စီးပွားရေးအနေနဲ့ ဟိုတယ်ဖွင့်ထားတယ်..မင်္ဂလာခန်းမပါပါတယ်…ခန်းမလာဌားကြရင် ကျွန်တော့်ကိုပြောကြတယ် ကျွန်တော့်တို့ မင်္ဂလာဆောင်ကို သူများနဲ့ လုံးဝမတူချင်ဘူး…မုန့်ကစပြီး သူများကျွေးတာ မကျွေးချင်ဘူး…ခန်းမလာရင်လဲ ဘယ်လိုထွက်ချင်တယ်..ဘာညာ နဲ့ အစုံပဲတောင်းဆိုကြတယ်) ရှေ့မှာတော့ ကျွန်တော် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြောပေးပါတယ်…ဒါပေါ့..တသက်မှာ တခါပဲဆောင်ရတဲ့ မင်္ဂလာဆောင် သူများနဲ့တူလို့ ဘယ်ဖြစ်မှာလဲ ဆိုပြီး….ဒါကတော့ စီးပွားရေးကိုးနော့…သူတို့ ပြန်သွားရင်တော့ တစ်ယောက်ထဲ ပြုံးမိတယ်…သုံးမိနစ် စောင့်…အဲလေ ဟုတ်ပါဘူး…သုံးနှစ် စောင့်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်လို့…အဲ့ သုံးနှစ်ပြီး ဘယ်လိုလာကြဦးမလဲလို့…(အားလုံး စိတ်ကူးယဉ်ထားသလို နားလည်မှုအပြည့်နဲ့ အိမ်ထောင်ရေး တည်ဆောက် နိုင်ကြပါစေ)
ဪ။ မနေ့က ပို့(စ) ကိုဖတ်မိတော့ ဒီ စာကို လုံးဝ သိတယ်လို့
ဘယ်သူ စတေးတပ် ပါလိမ့်လို့ လုံးဝ စဉ်းစားမရဘူး။
ခု ဟိုတယ် လုပ်ငန်းဆိုမှ သိသွားပြီ။ :harr:
ဟီး။ ပို့(စ) နဲ့မဆိုင်တာပြောမိရင် ခွင့်လွှတ်ပါ။ သူများတွေ လာငြင်းတာတွေကိုစောင့်ဖတ်ပါ့မယ်။
အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ တရားသေ သီဝရီထုတ်လို့မရဘူးလို့ပဲ ကိုယ်တိုင်ယူဆထားတဲ့ အတွက် ဘာမှမပြောလို။ :hee:
အိမ်ထောင်ပြုပီဆိုရင် ဘယ်နှစ်ဖက်မိဘအိမ်မှ မနေဘဲ ကိုယ့်ဘ၀ကို သီးသီးသန့်သန့် အရင်ထူထောင်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်…. :hee:
မွန်ကစ်ပြောသလို အိမ်ထောင်သည်များ ပြုလုပ်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံဘဲဗျာ။
ဟိုတယ်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုလို့ ဘယ်နားမှာလဲဗျ တကယ်လို့ ရောက်ဖြစ်ရင် ၉၀% ဒစ်စကောင့် နဲ့ တည်းချင်ပါဒယ် ။
ဂလောက်တောင် ပတ်တနာများဒယ်ဆိုတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးးးးး
မစင်းဇားပဲ တယောက်ထဲ နေကျိဂျပါလားလို့ ………. ခွစ်ခွစ်ခွစ်
အင်း ပြန်ပြောလိုက်အုံးမယ် .. နားလည်မှုရှိရင်အကောင်းဆုံးပဲလို့ …
နားမလည်နိုင်ကြတာကတော့ .. ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ ကိုယ်ပေါ့ …
ဘယ်သူမဆို ဘယ်နေရာမှာ မဆို အဆိုးနဲ့ အကောင်းဆိုတာ ဒွန်တွဲနေတာပါ …
မကောင်းတာချည်းပဲ ပြောလို့မရသလို ကောင်းတာချည်းပဲလို ရှိချင်လို့မရပါဘူး ..
ကိုယ်ပြုခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်ကံ ၊ အကုသိုလ်ကံနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ် ….
ငါကတော့ အရက်သမားဆိုအရမ်းမုန်းတယ် .. ဟော ရတော့ အရက်သမားနဲ့ ရပါရော …
ငါကတော့ တောမှာ မနေနိုင်ပါဘူးအေ .. ဟော တောသားနဲ့ ညားပြန်သတဲ့ …
ဘယ်နေရာမှာ ဘာတွေပဲ ဖြစ်လာဖြစ်လာ နားလည်မှု ထားပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ..
ဒါပေသိ.. အားလုံးကနားလည်မှုတွေရှိနေကြပြန်ရင်လည်း ပျင်းစရာကောင်းတဲ့လောကကြီး ဖြစ်သွားပေတော့မယ်…
သို့အတွက်ကြောင့် နားလည်သင့်တဲ့နေရာ နာ;လည်ပြီး ကောက်သင့်တဲ့နေရာ ကောက် …
ကွေး သင့်တဲ့နေရာကွေး အဲလေ မှားလို့ ..
ပြောသင့်တာတော့ ပြောရမယ် … ပြသင့်တာလည်းပြရတော့မပေါ့ ..(ဖိုက်တင်အစွမ်းတွေပြောပါဒယ်)
ရန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်နဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်လောကကြီး ကို ပိုင် ဆိုင် ရနိုင်ပါစေပေါ့ ..
ဟိုတယ်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုလို့ ဘယ်ဟိုတယ်လဲသိချင်ပါတယ်။ February လထဲမှာ ဧည့်သည် ၂ ယောက်လာဖို့ရှိလို့ပါ။ လောလောဆယ် ရွေးထားတာတော့ရှိပါတယ်။ အခြေအနေအရ ပြောင်းချင်ရင် ပြောင်းသင့်ရင် ပြောင်းလို့ရတာပေါ့။
ဘာရယ် မဟုတ်ဘူး… ဖေ့ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာ နိုင်းနိုင်းစနေ ရေးတင်ထားတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး (သို့) လက်ထပ်နည်း သုံးမျိုး တွေ့လို့ ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်…
ပထမအမျိုးအစားနဲ့ လက်ထပ်တဲ့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးက တည်မြဲတဲ့အဆင့်မှာရှိတယ်။
ဒုတိယအမျိုးအစားနဲ့ လက်ထပ်တဲ့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးက ပိုတည်မြဲတဲ့အဆင့်မှာရှိတယ်။
တတိယအမျိုးအစားနဲ့ လက်ထပ်တဲ့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးက ကွာရှင်းတဲ့လမ်းမမြင်ခဲ့ဘူး။
ဒီလောကကြီးမှာ ဆံဖြူသွားကျိုးတဲ့အထိ ချစ်နိုင်ကြတဲ့လူတွေဟာ အခြေခံအားဖြင့် ဘဝမှာ(၃)ကြိမ် လက်ထပ်ကြရတယ်။
ပထမတစ်ကြိမ်က စားသောက်ဆိုင်မှာ၊ ဆိုင်ကြီးကနားမှာ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့ ဆုမွန်ကောင်းတွေကြားမှာ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ လက်ထပ်တာဖြစ်တယ်။
ဒုတိယအကြိမ်က အိမ်မှာလက်ထပ်တာဖြစ်တယ်။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး သဟဇတဖြစ်အောင် တစ်ဘက်သားရဲ့အကျင့်နဲ့ လက်ထပ်တာဖြစ်တယ်။
တတိယအကြိမ်က အမျိုးတွေကြားမှာ လက်ထပ်တာဖြစ်တယ်။ တစ်ဘက်သားရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ သင့်မြတ်အောင် လက်ထပ်တာဖြစ်တယ်။
ဒုတိယအကြိမ်နဲ့ တတိယအကြိမ်လက်ထပ်တာက ပထမအကြိမ်နဲ့ လုံးဝကွဲပြားတယ်။ အဲဒီလက်ထပ်ပွဲတွေမှာ ခမ်းနားတဲ့ မင်္ဂလာအဆောင်အယောင်တွေ မပါသလို၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေရဲ့ ဆုမွန်ကောင်းတွေမပါခဲ့ဘူး။ အခမ်းအနားမှာ နှစ်ဦးသားရဲ့ နားလည်မှုပဲရှိခဲ့တယ်။
တကယ်လက်ထပ်တယ်ဆိုတာက နောက်ဆုံးနှစ်ကြိမ်နဲ့ ပိုဆိုင်ပါတယ်။
အခုခေတ် လူအများရဲ့အိမ်ထောင်ရေးက လက်ထပ်ပြီး နှစ်တိုတိုအတွင်းမှာ ကွာရှင်းကြတယ်။ ကွာရှင်းကြတဲ့အကြောင်းရင်းကို ဆန်းစစ်ကြည့်ရင် ကိုယ်လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ပထမအကြိမ်ကို ဒုတိယအကြိမ်ထိ အရောက်မတွန်းပို့နိုင်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ရေနွေးဆူဆူက ပိုးမွှားတွေကို သတ်ပစ်နိုင်သလို အချိန်မြင့်တဲ့အချစ်ဒီဂရီက ချစ်သူရဲ့ အားနည်းချက်နဲ့ မပြည့်စုံမှုကို မျက်ကွယ်ပြုနိုင်တယ်။
ချစ်နေတဲ့အချိန်မှာ မမြင်ခဲ့မိတဲ့ အားနည်းချက်၊ မပြည့်စုံမှုတွေက လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းဆိုတဲ့ မပူ၊ မအေးတဲ့ ရေထဲရောက်သွားတဲ့အခါ အဲဒီအားနည်းချက်နဲ့ မပြည့်စုံမှုတွေက ပိုးမွှားတွေလို ပြန်ရှင်သန်လာတတ်တယ်။
ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ဒုတိယအကြိမ်လက်ထပ်ခြင်းကို ကိုယ်ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ သူ့အကျင့်နဲ့လက်ထပ်မယ်၊ သူရဲ့အားနည်းချက်နဲ့ မပြည့်စုံခြင်းတွေကို နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးမယ်၊ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် အိမ်ထောင်ရေးက အမြစ်ပါးသွားတဲ့သစ်ပင်လို တဖြေးဖြေး ကျူံ့ဝင်ခြောက်ကပ်သွားနိုင်ပါတယ်။
အရမ်းချစ်ပြီး ယူထားကြသူနှစ်ဦးက နှစ်တိုတိုလေးအတွင်းမှာ ကွာရှင်းကြတာဟာလည်း ဒုတိယအကြိမ် လက်ထပ်ခြင်းဆီ အရောက်မသွားနိုင်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။
ဒုတိယအကြိမ် လက်ထပ်ခြင်းထဲ ဝင်ရောက်နိုင်သူနှစ်ဦးက “ကွာရှင်းမယ်”ဆိုတဲ့စကားကို အပြောနည်းသွားတတ်တယ်။ သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ တစ်ဘက်သားရဲ့ အကျင့်စရိုက်နဲ့မပြည့်စုံမှုတွေကို နားလည်လက်ခံထားလို့ဖြစ်တယ်။ တစ်ခါတလေ တစ်ဘက်သားရဲ့ ဒီလိုမပြည့်စုံမှုက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်မှုအသွင် ပြောင်းစေခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။
ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ အိမ်ထောင်ရေးက ချိုမြိန်နွေးထွေးနေပြီး အချင်းချင်း နားလည်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတွေနဲ့ ပြည့်နေပါလိမ့်မယ်။
အိမ်ထောင်ရေးနွေးထွေးတာနဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတည်မြဲပြီလို့ ယူဆလို့မရနိုင်သေးဘူး။ အိမ်ထောင်ရေးတည်မြဲဖို့ တတိယအကြိမ်လက်ထပ်ခြင်းကို အရောက်တက်လှမ်းနိုင်ရဦးမယ်။ အဲတာက တစ်ဘက်သားရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ လက်ထပ်တာပဲဖြစ်တယ်။
တစ်နည်းပြောရရင် သူ့အပေါ်ထားတဲ့ ကိုယ်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ သူ့မိဘ၊ သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းဆီအရောက် ဖြန့်ကျက်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒီလိုချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုးမှာ အိမ်ထောင်ရေးအတွက် အသိဉာဏ်တွေကိုပေးတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့တစ်ခြမ်းကို ကိုယ်ပဲပိုင်ဆိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ကို သူ့မိဘ၊ သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေလည်း ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ကိုယ်သူ ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ အိမ်ထောင်ရေးကတည်မြဲပြီး ခွဲချင်တယ်ဆိုရင်တောင် မလွယ်တကူ မခွဲနိုင်တော့ပါဘူး။
ချစ်ခြင်းလောကမှာ ယောက်ျားအများစုက အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ မိန်းမတစ်ယောက်ကို လက်ထပ်ယူလိုက်တာပဲလို့ ထင်မှတ်ကြတယ်။ အဲဒီမိန်းကလေးရဲ့လိုအင်နဲ့ သူ့ရဲ့နောက်ခံဘက်ဂရောင်းကို လျစ်လျူရှူထားတတ်ကြတယ်။
မိန်းကလေးအများစုကလည်း အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို လက်ထပ်တာလောက်ပဲသိခဲ့ပြီး အဲဒီယောက်ျားရဲ့အကျင့်၊ စရိုက်နဲ့ သူ့ရဲ့နောက်ခံဘက်ဂရောင်း ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့လည်း လက်ထပ်ရမယ်ဆိုတာကို မသိနားမလည်ခဲ့ဘူး။
ဒီလိုမသိနားမလည်ခြင်းကြောင့် အခုခေတ်မှာ အိမ်ထောင်ပြိုကွဲသူတွေ ပိုများလာတာကို တွေ့ကြရတယ်။
မူရင်းရေးသားသူ– Liu Yanmin
နိုင်းနိုင်းစနေ (Friday, February 12, 2010)
မျှတသော သဘောထားများ၊ နားလည်မှုများနှင့် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော မိသားစုဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ တသီးတသန့် လည်း နေနိုင်ကြပါစေ။
ဝင် မဆွေးနွေးနိူင်တာကိုက အတော်ဆိုးတဲ့ ဝေဒနာပဲ ။
မင်္ဂလာခန်းမ ဖွင့်ထားတယ်ဆိုတော့ ကျနော် မင်ဂါဆောင်ရင်
၉၉.၉၉% ဒစ်စကောင့်လေးဘာလေးများပေးမယ်ဆိုရင် အထူးစိတ်ဝင်စားလှပါကြောင်းးးးးးးးးးးးးးး
တခုချင်း ပြောမယ်နော်…ခိုင်ဇာရေ…မနေ့က ပို့စ်က ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ ရေးထားပြီးသားပါ…အသိတွေ ထင်တာပဲနော်…မွန်ကစ်ရေ…သီးသန့် နေနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့နော်..ဒါပေမယ့် အိမ်တွေ ခြံတွေက ဈေးခေါင်ခိုက်နေတော့ မ၀ယ်နိုင်သေးဘူး..မိဘအိမ်မှာပဲ ကပ်နေရတာပေါ့…မိသားစုကလဲ နည်းတော့ ကိုယ်က ခွဲဆင်းသွားရင် အသက်ကြီးကြီး မိဘကို ပစ်ထားသလိုလဲ ဖြစ်မှာ စိုးလို့ပါ…သုဝေနဲ့ ပန်းစပယ်က ဟိုတယ် နာမည် သိချင်တယ် ဆိုတော့ အရိပ်အမြွက်ကလေးပဲ ပြောလိုက်တော့မယ်..
.တောင်ပေါ် အေးတဲ့မြို့ကပါ…နာမည်က သုံးလုံး ကြာသပတေးနံ စပြီး စနေနံ ဆုံးပါတယ်…ကျန်သော မန့်သူအပေါင်းအားလဲ ကျေးဇူးကမ္ဘာပါနော…